Ndi ọha mara amara ahihia nwere Genybet nwekwara akwukwo oyuche nke n’e enyere gi aka igbanye ma bie ndu tupu gi akwado egwuregwu iri abuo.. Iji na-adọta ndị njem, na-enye nnabata onyinye saịtị site na 50 € kporo egwuregwu, nke bu na mgbakwunye 200 € nyere n’elu ahihia (lee nkọwa ebe a). Ọ bụ mkpokọta, ndị na - edebanye aha ọhụrụ ga - enweta ihe ruru € 250 nzọ nza.
Na daashi bụ 50 € nloghachi nke egwuregwu ịkụ nzọ egwuregwu mbụ ma ọ bụrụ na ọ gwụrụ. A ga-ekwupụta gị n'ime 24 awa ma ọ bụrụ na ị na-eme usoro nkwado mgbe ị na-etinye ego nzo gị. Ma ọ bụghị ya, will ga-anata 10 €, emesia nke ozo (40 € max.) Ozugbo ị gbanye akaụntụ gị, n'ihu koodu nzuzo zitere site na ọrụ ndị ahịa email.
AKW PRKWỌ AHEŚRES MAKA SPORT GETYENET GENYBET GENYBET MAKA GENYBET BONUS BONUS AKW SPKWỌ AKWORTKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ maka mbubre ihe gbasara nhichapụ GENYBET GENYBET
Iji debanye aha na Genybet ma ziga ndị ahịa dị mkpa na ọrụ ndị ahịa. Pinye koodua PIN nke enwetara site na nzipu gi na Pọtụfoliyo Ebe E Si Nweta. N’ikpeazụ, tinye prognostic egwuregwu maka ihe ị họọrọ. Ọ bụrụ na ọ tụfuru, pay na-akwụ Genybet ka onye were ya n'ọrụ kwụ ego € 50. Onyinye enwetara ga-ewere ụdị egwuregwu egwuregwu ị ga-akwụghachi https://egwuregwu.genybet.fr/.
Gaa na Genybet.fr
Ozugbo ị nọ na saịtị ahụ, a na-enye ntanetị ịbanye n’ahịa ịkụ nzọ dị n’ịntanetị. Jupụta fọm ahụ nke ọma tinye ezigbo ozi gị. N'ezie, ọ bụrụ na i tinye ozi ụgha, tinyere njirimara gị, inwere ike inwee nsogbu ịdenye ma emechaa.
Mepụta akaụntụ ọkpụkpọ gị
N'ime ozi a, ị ga-abanye nkọwa akụ gị. Dị ka saịtị niile ịkụ nzọ dị n'ịntanetị, Nyefe ga-eme site na mbufe akụ. Achọkwara ozi nzuzo na nkeonwe. Ozugbo emechara mpempe akwụkwọ ahụ, pịa “Nzọụkwụ Ọzọ”.
Akaụntụ gị dị irè
Nke a dị mkpa n'ihi na enweghị ya, ị gaghị enweta uru ego dị iche iche saịtị a na-enye. Iji kwado akaụntụ gị, just dị nnọọ mkpa ka iziga akwụkwọ nkwado gị, gụnyere njirimara na nkọwa akụ. Na mgbakwunye, n'oge ahụ, will ga-enwe ike itinye koodu nkwado iji nweta onyinye ndị ọzọ mara mma.
Nwee njedebe akaụntụ gị
Ozugbo emere akaụntụ gị, must ga-edobe ego itinye ego agaghị agafe. Ana-elezi anya iji zere onye ọkpụkpọ na ịkụ nzọ ka a na-emegbu.
Nabata ego Genybet.fr: ole ka ha bụ?
Na Genybet.fr, have nwere ohere nke ụdị ego abụọ a ejirila debanye aha gị na saịtị ahụ. Ozo nke mbu na nke abuo, ịkụ nzọ egwuregwu.
Nabata ego na ịgba ọsọ ịnyịnya
Debanye ego na ịgba ọsọ ịgba ịnyịnya bụ inye gị ego nke 50%, ego ruru 200 euro. Dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na i nwere kredit 100 euro, Usoro Genybet.fr otu oge 50% nke ego emere, ebe 50 euro, agbakwunyere ego.
Rịba ama na a na-anakọta ego ahụ na ọkwa abụọ. Nke mbu 25% mgbe emechara nkwụnye ego ahụ, na ọkara nke abụọ mgbe ị mezuru akaụntụ gị.
Nabata ego na ịkụ nzọ egwuregwu
Banyere ịkụ nzọ egwuregwu, Genybet na enye ndi ohuru onyinye ego nke 50 euro na FreeBets. N’aka ozo, oge ọ bụla ị nzọ uru nke 50 euro, onye furu efu, Genybet weghachite ego zuru ezu na FreeBets.
Na mgbakwunye, daashi na lawns, ọ nwere otu ụkpụrụ ahụ, nzọụkwụ abụọ. Na 10 izizi euro ga - ezigara onye ọkpụkpọ n'ime 10 ụbọchị na ndị ọzọ nke adịchaghị (kacha 40 euro) ozugbo enwere ike akaụntụ.
Nkwalite nkwado nke Paris
Genybet bu ihe puru iche n’agba ije inyinya na ebe nlebara anya di n’ime ulo oru turf. ọtụtụ ndị hụrụ egwuregwu n'ịnyịnya ịgba ọsọ dọtara mmasị Genybet na nke a.
Ọzọkwa, Genybet na-enye onyinye di elu nke ulo oru turf. Ego a bu nke ikpo okwu n’enwe mgbe nile, dabere na mkpa nke ihe omume ahụ ma ọ bụ oge nke afọ. Ọzọkwa, ndị otu atụ aro site na amụma ndị ọkachamara ma nwee ike isonye na asọmpi ahụ site na dashboard gosipụtara akara oge dị adị.
Otu esi ewepụ ego egwuregwu egwuregwu Genybet na ezigbo ego?
Ozugbo ị ga-atụfu nzọ mbụ gị, Genybet na-enye onyinye nke 50 €. A na-amanye gị inyeghachi onyinye onye were gị n'ọrụ maka egwuregwu. Betsdị nzo, ọ chọghị ịma. Can nwere ike nzọ na okporo / mfe / Maka na ma ọ bụ mgbe egwuregwu bọọlụ ahụ dị.
Dị ka ahịhịa ahịhịa, a ga-akwụ ụgwọ iji nweta onyinye ego a na akaụntụ https gị://egwuregwu.genybet.fr/. Yabụ, ị nwere ike ihichapụ ya dịka ịchọrọ.
Biko mara na ego ndị enwetara ga-egwuriri n'etiti 3 ọnwa. Ọ bụrụ n'ijighi ya n'ime oge a, ị ga-ewepụ. Ọ bụrụ na ị mechie akaụntụ gị n’oge a, ị ga-atụfu ego ahụ.
Ihe Nlereanya: tufuo nzọ mbu izi nke gi 50 €. Ya mere, Genybet onyinye inwe mmekọahụ na-akwụghị ụgwọ 50, ị na-egwu na a akara nke 01:10. Ọ bụrụ na nzọ a merie, anyi ekene gi 55 € na ego.
Previous Previous post: France Gear R